एलियन आएर पृथ्वीकी महिलालाई गर्भवती बनायो ! - Mitho Khabar
एलियन आएर पृथ्वीकी महिलालाई गर्भवती बनायो !
April 10, 2022 mithokhabarLeaveaComment on एलियन आएर पृथ्वीकी महिलालाई गर्भवती बनायो !
काठमाडौं । विगतमा एलियन्स वा यूएफओ (उडन तश्तरी) को सम्बन्धमा धेरै अचम्मलाग्दो दाबीहरू गरिएका छन्। तर अहिले आएको दाबी अनुसार एलियनको एक महिलासँग सम्बन्ध थियो, त्यसपछि ती महिला गर्भवती भइन् ।
यो चकित पार्ने दावी त्यतिबेला बाहिर आएको हो जब एक प्रतिवेदनमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले युएफओ भेटेर ‘असाधारण अनुभव’ भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो ।
यस सम्बन्धमा रक्षा गुप्तचर एजेन्सीले पेन्टागनमा केही कागजात बुझाएको छ, जसलाई ‘द सन’ले प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदनले एलियन वा यूएफओ नजिक हुँदा देख्न सक्ने प्रभावहरू वर्णन गरिएको छ । यसमा मानिसहरूलाई चोट पुर्याउनेदेखि लिएर अपहरण र तिनीहरूसँग ‘सेक्स’ गर्ने घटनाहरू समावेश छन्। एक साक्षीले दावी गरे कि यूएफओले मानिसहरुसंग यौन सम्बन्ध राख्यो र एक महिलालाई पनि गर्भवती बनायो। युएफओ र मानिसबीच पाँच पटक ‘सम्भोग’ भएको रिपोर्ट आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा अमेरिकास्थित एजेन्सी MUFON ले मानिसमा यूएफओ दृष्यको जैविक प्रभाव र तिनीहरूको आवृत्तिको बारेमा बताएको छ। जसमा अपहरण, गर्भावस्था, यौनसम्पर्क, टेलिप्याथीको अनुभव जस्ता अनौठा घटनाहरु यूएफओको नजिक परेका मानिसहरुले अनुभव गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यूएफओ/एलियनको निकटताले मानिसहरूलाई चोट पुर्याउन सक्छ, विकिरणले जलाउन सक्छ, मस्तिष्कमा समस्या निम्त्याउन सक्छ वा उनीहरूको स्नायुलाई असर गर्न सक्छ। यस बाहेक, साक्षीहरूको अन्य अनुभवहरू दुःस्वप्न, आवाज गुमाउनु, आँखामा चोटपटक, सास फेर्न गाह्रो हुनु र तौल घट्नु परेको थियो।
प्रतिवेदनका अनुसार बाहिरी र अनौठो विमानको सम्पर्कका कारण धेरै मानिस घाइते भएका छन् । प्रतिवेदनले यस्ता वस्तुहरू अमेरिकी हितका लागि खतरा हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, चैत्र २७ गते आइतबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
ए मेरो हजुर ४ मा जि बबले गाएको गीत रिलीज, रिलिज भएको दुई घन्टामै युट्युब ट्रेण्डिङमा (भिडियो हेर्नुस्)
April 18, 2022 mithokhabar
विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले भन्यो – जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीं सुरक्षित बस्नुहाेस् !
पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर अनुषाको मृ’त्यु